सुचना/प्रबिधि – MeroJilla.com
वीर्य पनि २-३ मिनेटमै र्झछ ?कसरी बढी टिकाउने?
झापामा काँग्रेस हार्दा सिटौलामाथि अपजसको भारी
सांसदको नाम टुंगो लाग्न दुई हप्ता लाग्ने, समानुपातिकतर्फको मतगणना आज सकिदैं
दुबै पार्टी मिलेर जितेको हो, कसैले घमण्ड नगर्दा हुन्छ-प्रचण्ड
पाल्पामा एचआइभी संक्रमित समाज खुल्दै
३ सय ४५ वटा क्याम्पस विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा
अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाए सरकारलाई क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने
वीर अस्पतालको अति विशिष्ट क्याबिन २६ वर्षदेखि खाली
इन्धनमा मात्रै नेपालले मासिक ४२ करोड घाटा बेहोर्छ २ पुष २०७४, आईतवार ०६:२१
काठमाडौं,२ पौष । नेपाल आयल निगमले सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढाए पनि मासिक ४२ करोड रुपैयाँ घटा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि निगमले गत साता पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य बढाएको थियो । नागरिक दैनिकमा समाचार छ । डिजेल र ग्यासमा घाटा खाएर बेच्नु पर्दा निगमले घाटा बेहोर्नु परेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए । इन्डियन आयल कर्पोरेसन..
महावीर पुनलाई ‘रोटरी सर्भिस अवार्ड’ दिइने २५ मंसिर २०७४, सोमबार ०९:०२
बुटवल, २५ मंसिर । रोटरी क्लब अफ बुटवलले स्थापना गरेको रु दुई लाख राशिको पुरस्कार म्याग्दीका महावीर पुनलाई प्रदान गरिने भएको छ । अनुसन्धान क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेबापत पुनलाई नगद रु दुई लाख राशिसहितको ‘रोटरी सर्भिस अवार्ड –२०१७’ प्रदान गर्न लागिएको क्लबका पूर्व अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । क्लबको रजत जयन्तीको अवसरमा मंसिर २८ गते बुटवलमा आयोजना गर्न..
एशियाकै अग्लो बञ्जीजम्प पर्वतमा,मंसिरको अन्तीम सातावाट संचालनमा आउने १३ मंसिर २०७४, बुधबार ०९:२०
रामकृष्ण लामिछाने पर्वत ,१३ मंसिर । पर्वतको परिचय अग्ला पुलहरुले बनाउदै गएको बेला अहिले बञ्जीजम्पले अर्को परिचय दिने भएको छ । पर्वतमा अव बञ्जीजम्प एक आर्कषणको केन्द्रविन्दु बन्नेभएको छ । कालीगण्डकीको मुख्य केन्द्रविन्दुको रुपमा स्थापीत हुन लागेको यो बञ्जीजम्प बिश्वको दोस्रो अग्लो र एशियाकै अग्लो बञ्जीजम्प हो । हिस्रङ सिष्टमवाट निमार्ण गरिएको बञ्जीजम्प २५० मिटर..
भारतको विकल्पका रुपमा चीनतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव पठाइँदै ६ मंसिर २०७४, बुधबार ०६:३०
काठमाडौं, ६ मंसिर । तिब्बतको केरुङ हुँदै नेपालको रसुवागढी जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राविधिक रुपमा उपयुक्त भएको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई पठाउने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्राविधिक रिपोर्ट ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता..
फेसबुकमार्फत एक करोडभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने तीनजना पक्राउ ३१ आश्विन २०७४, मंगलवार १२:०४
काठमाडौं,३१ असोज । फेसबुकमार्फत बेलायतीका नाममा प्रोफाइल तयार गरी नेपालका विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गर्ने तीनजनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको छ । मोरङ उर्लाबारी घर भई हाल बूढानीलकन्ठ नगरपालिका–१० बालुवाखानी बस्ने पवन न्यौपाने, भोजपुर हतुवाघडी गाउँपालिका–७ का सन्तोष बस्नेत र मोरङ, सुन्दर हरैंचा–६ का प्रदीप सुब्बालाई प्रहरीको केन्द्रीय..
मोबाइल पानि मा खस्यो पिर नगर्नुहोस,घरमै मोबाइल नखोली यसरी बनाउनुहोस
सन्तोष के.शी ३१ असोज, पर्बत । हामी सबैलाई , आफनो फोन आफु भन्दा पनि प्यारो छ । तर १ मिनेटको लागी सोचेर हेर्नुस , तपाईको फोन पानीमा खस्यो वा पानीमा भिज्यो भने कस्तो हुन्छ ? अब यो फोनलाई सही गर्न संभव छ, तर कहिले काहि तपाईहरुबाट यस्तो गल्ती हुन जान्छ जसले तपाईको फोन सधैका लागि खÞराब हन जान्छ र तपाईको प्यारो फोन मात्र एउटा डब्बा बन्न जान्छ । आज तपाई यो पोस्ट पढदै जानुहोस , र म तपाईलाई..
फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्दा यी चार कुरा प्रयोग गर्नु होला २७ आश्विन २०७४, शुक्रबार ०८:५१
काठमाडौं २७ असोज । फेसबुकमा फोटो अपलोड हुँदा पहिलाको फोटो जस्तो राम्रो नदेखिएर तपाईहामीलाई समस्या हुँदै आएको छ । फेसबुकमा करीब ३५ करोड नयाँ फोटो प्रत्येक दिन अपलोड हुन्छन् । यति धेरै फोटो अपलोड र डेटा स्टोर भएपछि फेसबुक साइट स्लो हुनु स्वभाविक हो । कहिले काहीँ त फोटो नै बिग्रने गर्छ । यसबाट बच्नका लागि फेसबुकले फोटोलाई अटोमैटिकली एक डिफल्ट साइजमा परिवर्तन गरिदिन्छ । सोही..
जैमिनी नगरपालिका बागलुङमा एफएम रेडियो सञ्चालन हुने ,कुश्मीशेरामा स्टेसन २३ आश्विन २०७४, सोमबार १६:०७
बागलुङ,२३ असोज । सुवेक्षा मिडिया प्रा.लि.ले एफएम रेडियो सञ्चालनको तयारी थालेको छ । प्रा.लि.ले रेडियो दर्ता लगायतका सबै कानुनी प्रकृया पुरा भइसकेकाले आगामी मंसिर महिना सम्ममा रेडियो परिक्षण प्रसारणमा आउने सुवेक्षा मिडिया प्रा.लि.का निर्देशक गुमा आचार्यले बताइन् । जैमिनी नगरपालिकामा कुनैपनि सञ्चारमाध्याम सञ्चालनमा नरहेकाले एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न लागिएको आचार्यले..
“कुस्माको समग्र बिकासमा पर्यटनको संभावना” २९ भाद्र २०७४, बिहीबार १०:०९
सचिन्द्र श्रेष्ठ, अहिले कूस्माको पर्यटन बिकास अग्रगति तर्फ लमकिरहेको र सम्भावनाहरु लाई नर्कार्न कदापी सकिदैन। धेरै नेता र बिद्वानहरु पाएर पनि पछि परिरहेको अवस्थामा अहिले पहिलो पटक जनताले चुनेको ब्यक्ति पाउन सफल भएको छ । कुस्मालाई बिकसित मुलुकको दाजो मा बनाउन नसके पनि यहाँका प्राकृतिक सम्पदा, गुफा, मठ मन्दिर र सास्कृतिक पक्षलाई अघि बढाउन सके पर्यटन बिकासले फड्को..
अब चलाउने होईन त ‘आइफोन–८’ भदौ २७ गते आउदैं २२ भाद्र २०७४, बिहीबार १८:५१
काठमाडौं, काठमाडौं, २२ भदौ । एप्पलको ‘आइफोन–८’ को सार्वजनिक हुने यहि भदौ २७ गते अर्थात सेप्टेम्बर १२ तारिकमा हुने भएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको क्युपर्टिनोे एप्पल कम्पनीको मुख्यालयमा रहेको स्टिभ जब्स थियटरबाट उक्त आइफोन सार्वजनिक हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । आइफोनको नयाँ सेट ‘आइफोन–८’ भर्सन सार्वजनिक भएसँगै प्रयोगकर्ताले नयाँ सुविधासहित..
चीनबाट इन्टरनेट खरिद ,ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । नेपालले एक वर्षको अवधिमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट खरिद गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष एक अर्ब ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेको हो । यो रकम विसं २०७२ मा एक अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गरेर नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले..
वीर्य पनि २-३ मिनेटमै र्झछ ?कसरी बढी टिकाउने? २ पुष २०७४, आईतवार १३:३२
दाह्री काट्ने र नकाट्ने पुरुष को यौन र जीवन २ पुष २०७४, आईतवार १३:२७
झापामा काँग्रेस हार्दा सिटौलामाथि अपजसको भारी २ पुष २०७४, आईतवार १२:५८
सांसदको नाम टुंगो लाग्न दुई हप्ता लाग्ने, समानुपातिकतर्फको मतगणना आज सकिदैं २ पुष २०७४, आईतवार १२:४७
दुबै पार्टी मिलेर जितेको हो, कसैले घमण्ड नगर्दा हुन्छ-प्रचण्ड २ पुष २०७४, आईतवार ०६:४६
पाल्पामा एचआइभी संक्रमित समाज खुल्दै २ पुष २०७४, आईतवार ०६:३१
३ सय ४५ वटा क्याम्पस विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा २ पुष २०७४, आईतवार ०६:२९
अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाए सरकारलाई क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने २ पुष २०७४, आईतवार ०६:२६
वीर अस्पतालको अति विशिष्ट क्याबिन २६ वर्षदेखि खाली २ पुष २०७४, आईतवार ०६:२४
जग्गा प्लटिङ अनुमति छानबिन गर्दै अख्तियार २ पुष २०७४, आईतवार ०६:२०
अब तत्काल पार्टी एकीकरण : दाहाल २ पुष २०७४, आईतवार ०६:१८
ओलीको आरोपः कांग्रेसले बखेडा झिकेर सत्तामा टाँसिन खोज्यो १ पुष २०७४, शनिबार १८:०९
दैनिक राशिफल र शुभसाईत कसरी प्रस्तुत हुन्छ रेडियोमा भिडियो सहित १ पुष २०७४, शनिबार १८:०२
हस्तमैथुन गर्न बढी रुचाउने केटा कि केटी ? १ पुष २०७४, शनिबार १७:३०
हात्तीको बच्चालाई ज्युँदै आगो लगाए, पिडाले जोड-जोडले कराइरहेको थियो
स्तन ठुलो बनाउने यस्तो घरेलु उपाय !
कैदीबन्दीले प्रजननका लागि कारागारभित्रै सेक्स गर्न पाउने !
मुटु बाहिरै लिएर जन्मिएकी भ्यानेलोपीको सफल शल्यक्रिया (७ तस्वीर)